साङ्ला बाट हैरान हुनुहुन्छ तेसो भए यसो गर्नुस ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
साङ्ला बाट हैरान हुनुहुन्छ तेसो भए यसो गर्नुस ?
गर्मी बढेसँगै प्रायः भान्सामा साङ्ला सलबलाउन थाल्दछन् । कतिलाई साङ्ग्ला घिनलाग्दा लाग्छन् भने धेरै महिला त योसँग डराउनेसमेत गर्दछन् । साङ्ग्लाले खाना, कपडा लगायत कोठाका धेरै सामग्रीमा क्षति पुर्याउँछ ।